Mgbanwe nkwụghachi ụgwọ - Ụlọ akwụkwọ asụsụ na Canada
Ntucha na imechi oge
Ụmụ akwụkwọ chọrọ ịhapụ mmalite nke usoro ga-agwa BLI tupu oge eruo. A ga-enye akwụkwọ ozi ọhụrụ nke nnabata maka ụbọchị na-esote n'efu maka ụmụ akwụkwọ na-amụ ihe na ọnwa 6. A ga-ebo ụmụ akwụkwọ na-amụ ihe ọnwa 6 $ 70 CAD.
A ghaghị inye ọkwa niile nke ịkacha aha na ederede site na ozi, ozi fax, ma ọ bụ e-mail na-ekwupụta na ị bu n'obi ịhapụ ihe omume ahụ ị debanyere aha. Ndenye aha na ntinye ego nke ụlọ agaghị akwụ ụgwọ.
Ọ bụrụ na nwaa akwụkwọ iwu ka ịkagbu usoro ihe omume ya n'ihi nkwenye nke visa, a ga-akwụghachi ụgwọ zuru ezu ma ọ bụrụ na ị gaghị akwụ ụgwọ ndebanye ndebanye na ụgwọ ụlọ. Rịba ama na BLI chọrọ ịnweta akwụkwọ mbụ nke akwụkwọ jụrụ ajụ nke Canada.
Ụmụ akwụkwọ kwesịrị ịdaba na ntuziaka ndị a iji ruo eruo maka nkwụghachi ụgwọ:
Tupu usoro amalite ụbọchị
a) Ihe na-erughị ụbọchị 10 mgbe ị debanyere akwụkwọ ndebanye aha gị • 100% nke ụgwọ akwụkwọ akwụkwọ.
b) Ụbọchị 31 ma ọ bụ karịa tupu usoro amalite amalite • 70% nke ụgwọ akwụkwọ akwụkwọ.
c) Ọ bụrụ na onye akwụkwọ ahụ kwụsịrị obere ụbọchị 30 tupu usoro amalite ụbọchị · 60% nke ụgwọ akwụkwọ akwụkwọ.
Mgbe usoro amalite ụbọchị
a) N'etiti 1-10% nke usoro ihe omume · 50% nke akwụkwọ ego nkuzi.
b) n'agbata 11 - 24% nke usoro ihe omume ahụ · 30% nke ụgwọ akwụkwọ akwụkwọ.
c) 25% ma ọ bụ karịa nke usoro ihe omume · 0% nke ụgwọ akwụkwọ akwụkwọ.
Ụmụ akwụkwọ nwere ike ịkwalite ma ha adighi emezi ihe omume ha. dịka Ọ bụrụ na onye a na-amụrụ ihe chọrọ ịgbanwe site na oge zuru ezu iji mepụta oge mmemme, ọ ga-eme ka ịmebie ihe omume ahụ ma gbanye ya. A ga-etinye iwu nkwụsị.
* Ọ bụrụ na nwa akwụkwọ na-abịa Canada na-enye akwụkwọ ikikere ọmụmụ akwụkwọ BLI, ọ ga - akwụghachị ikike niile nkwụghachi.
Ịkwụghachi ụgwọ nwoke
Enwere ego ịkwụsị ego na-akwụ ụgwọ. Ụmụ akwụkwọ kwesịrị inye 2 izu na-edegara onye na-elekọta ndị na-elekọta mmadụ ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịgbanwe ebe obibi ha. Ụbọchị 4 mbụ nke ememe mmadụ anaghị akwụghachi ụgwọ.
Oge ịhazi nkwụghachi
Ọ bụrụ na ọ ga - akwụ ụgwọ maka nkwụghachi ụgwọ n'ọnọdụ ndị dị n'elu, a ga - akwụghachi gị n'ime ụbọchị ụbọchị 45 na - esote mgbe e natara akwụkwọ edemede nke nkwụsị.
Biko rịba ama na ego ntinye aha na ego ntinye ego anaghị akwụ ụgwọ n'ọnọdụ ọ bụla